Wararka - Saldhigga tamarta korontada ee ugu weyn adduunka oo la dhisayo – Biyo-xireenka Saldhigga Biyo-xireenka ee Bayhetan ayaa ku dhow inuu gaaro meesha ugu sarreysa.
Saldhigga tamarta korontada ee ugu weyn adduunka oo la dhisayo–Bayhetan Hydropower Dam waxa uu ku dhow yahay inuu gaaro meesha ugu sareysa.
Saldhigga tamarta korontada ee ugu weyn adduunka oo la dhisayo - Biyo xireenka Saldhigga Biyo-xireenka ee Baihetan ayaa ku dhow inuu gaaro meesha ugu sarreysa.Ma jirin wax dillaac ah oo heerkul ah tan iyo bilowgii shubidda 8 milyan m³!
Saldhigga tamarta korontada ee weyn ee adduunka ugu weyn iyo dhismaha ugu adag ——Baihetan Hydropower Station.Ku orod xagga sare ee xariiqda oo dhan!
Habka dhismaha biyo-xireenka ee Saldhigga Korontada ee Baihetan waxa uu dhigayaa diiwaanno badan:
Xuduudaha seismic ee biyo-xidheenka sare ee 300-mitir - No. 1 ee adduunka
Markii ugu horeysay adduunka, shubka sibidhka kuleylkiisu yar yahay ayaa loo adeegsaday dhammaan biya xireenka dheer ee 300 mitir.Biyo-xireenku wuxuu u adkaysanayaa wadarta guud ee qulqulka biyaha ee 16.5 milyan tan - lambarka 2 ee adduunka
Biyo-xireenka Arch waa 289 mitir - lambarka 3 ee adduunka
Biyo-xireenku waa udub dhexaadka dhismaha mashruuca saldhiga tamarta, waxa uu qabtaa hawsha muhiimka ah ee ilaalinta biyaha iyo soo daynta fatahaadaha.Biyo-xireenka Saldhigga Korontada ee Baihetan waa 300-mitir oo shub ah oo heerkiisu sareeyo oo laba-laaban leh.Dhererka ugu badan ee biyo-xireenka waa 289 mitir, dhererka arc ee biyo-xireenka waa 709 mitir.Jidhka biyo-xidheenka waxa lagu habeeyey 6 godad hoose oo leexsan, 7 godad qotodheer oo daad daad ah iyo 6 godad mitir oo daad, qaab dhismeed adag.
Marka loo eego xogta laga helay Xarunta Hydrometeorological Center ee Jisha River, 2020 Baihetan Hydropower Station Area, 251 maalmood oo cimilo dabayshu ka sarreyso heerka 7, 70.5% sanadka oo dhan.Xaaladaha cimiladu halka ay ku taallo Saldhigga Korontada ee Baihetan waxay keenaysaa caqabado badan oo ku wajahan biyo-xidheenka shubka.
Cimilada ka sokow, biyo-xidheenka Saldhigga Biyo-xidheenka ee Baihetan waxa lagu qabsaday tiro cillado farsamo oo caalami ah.No. 1 ee adduunka ee xuduudaha seismic ee biyo-xireenka la taaban karo ee 300-mitir ultra-sare, wuxuu buuxiyaa xaaladaha juqraafiyeed ee adag, faraqyo farsamo oo badan oo ku saabsan dhismaha biyo-xireennada ultra-sare.
Isticmaalka shubka sibidhka kulaylka yar ee dhammaan biyo-xidheenka 300-mitir ee super-sare-dam, isticmaalka tignoolajiyada cusub ee heerka koowaad ee dhismaha saxda ah ee saxda ah ee albaabka albaabka, iyo hawlgal badbaado leh oo hufan. oo ka mid ah toddoba wiish cable double-madal ayaa ugu horreeya warshadaha.Maamulka macluumaadka dhismaha si caqli gal ah ayaa la sameeyay.Platform, si loo xaqiijiyo maaraynta wanaagsan iyo xakamaynta dhammaan wareegtada dhismaha iyo hawlgalka, iyo Biyo-xidheenka Saldhigga Biyo-xidheenka ee Baihetan wuxuu noqday biyo-xidheenka ugu "casriga ah" taariikhda.
Waxaa lagu soo waramayaa in shubanka la taaban karo ee jirka ugu weyn ee Baihetan Dam, wadarta mugga ayaa gaaraya 8 milyan oo mitir cubic, oo loo qaybiyay 31 qaybood oo biyo-xireen ah.Ma jiro dildilaac heerkul ah tan iyo markii la bilaabay shubista.Dhammaan tilmaamayaasha waxaa la kulmay heerka "mashruuca wanaagsan" ee ay soo jeediyeen Kooxda Saddexda Gorge.
Sannadka 2019, biyo-xireenku wuxuu soo saaray 25.7 mitir oo ah xudunta dheer ee shubka ah, xudunta la taaban karo waa siman oo cufan, wadarta guud ayaa si siman loo qaybiyaa oo ay leedahay xumbo hawo yar, waxay soo gudbisay dhismo la taaban karo oo tayo sare leh "transcript".
Bilawga 2021, heerkan 300-mitir la taaban karo ee super-sare double-curvature dam, U Sprint dhanka sare.Waxaa la filayaa in biyo-xireenkan la soo shubo halka ugu sarreysa bisha May ee sanadkan, waana mashruucii ugu weynaa ee koronto ee dunida laga dhisayo."July 1" dufcaddii kowaad ee unugyada wax-soo-saarka ayaa la geliyay wax-soo-saar si ay aasaas adag u dhigaan.